बालउद्यान निर्माण गर्न प्रदेश सभासदस्य थापा र मेयर कार्कीले उठाए कोदालो – Mero Pradesh TV
गौशालामा करेन्ट लागेर एक बालिकाको मृत्यु
पार्टी फुटाउन नहुने भन्दै पार्टी कार्यालयमा नेकपाका युवा, विद्यार्थीको धर्ना
कमला नदीमा बाढी बढेपछि सिरहाका स्थानीय चिन्तित
नेपालमा थप १ सय १८ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण कुल संक्रमितको संख्या ८ हजार ६ सय ३ पुग्यो
भारतका ग्याङस्टार विकास दुवेको यसरी भयो ‘इन्काउन्टर’
दुई अर्बको सामान अलपत्र
प्रदेश नं २ का जिल्लाहरूमा डुबान सुरू प्रदेश सरकार माैन
सातै प्रदेशमा ठूलाे वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन सुझाव
बालउद्यान निर्माण गर्न प्रदेश सभासदस्य थापा र मेयर कार्कीले उठाए कोदालो
Mero Pradesh TV Desk ४ असार २०७७, बिहीबार
प्रदेश २ का सभासदस्य शारदा देवी थापाले समाइन् कोदालो अनि भिडिन् बालउद्यानको जग खन्न । महोत्तरीको बनरझुल्ला माध्यमिक विद्यालयको हाताभित्र बन्न लागेको बालउद्यानको शिलान्यासका लागि सभासदस्य थापा आफैले कोदालो चलाएर जग खनिन् ।
त्यसअघि बर्दिबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख बिदुरकुमार कार्कीले पनि जग खन्नमा आफ्नो श्रम खर्चिसकेका थिए । सम्भवत् सभासद थापा र नगरप्रमुख कार्की यस किसिमको शिलान्यस कार्यक्रममा पहिलो पटक सहभागि भएको हुनुपर्दछ ।
उनीहरु प्रमुख अथिति बनेर थुप्रै शिलान्यस गरे होलान् । तर बनरझुल्ला माविमा गरिएको शिलान्यस कार्यक्रम अलिक फरक शैलीको भएको महसुस गरेका थिए ऊनीहरुले । शिलान्यास गर्न आयोजकले खाडल खन्नेदेखि यावत् सामग्री तयारी अवस्थामा राखेका हुन्छन् । यहाँ भने फरक थियो । आफैले खाडल खन्नुपर्दा अथितिको रुपमा निम्तिएका सभासदस्य थापा र नगरप्रमुख कार्की एकछिन अलमलमा परेपनि नयाँ ढङ्गको पारिपाटीलाई खुशीसाथ ग्रहण गर्दै सबको खुशीमा सहभागि बने ।
सभासदस्य थापा र नगरप्रमुख कार्कीले जब–जब कोदालोको चोट भूइमा बजार्थे तब–तब उपस्थित भीडले ताली बजाएर स्वागत दर्शाउँथे । अथितिको पाले सकिएपछि त झन के थियो र ? बालउद्यान शिलान्यास कार्यक्रममा निम्त्यिाएका अन्य अथिति र आयोजकका सदस्यहरुले पालैपालो जग खन्नमा श्रम खर्च गरे ।
बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नं. ९ पशुपतिनगरमा रहेको बनरझुल्ला माविको प्राङ्गणमा जनसहयोगी युवा सञ्जाल बर्दिबासको सहकार्यमा निर्माण गरिन लागेको बालउद्यानको शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित भएका वडाअध्यक्ष टेकवीर रखाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका स्वकीय सचिव शंकर महतो, विनायक होटलका सञ्चालक बिष्णु खड्का, यामाहा शोरुम बर्दिबासका सञ्चालक हेम थापा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामजतन महतो, समाजिक अभियन्ता तथा युवा पत्रकार राजकरण महतो, स्थानीय पत्रकार अमृतकुमार महतो, रेडियो नेपालका फुलगेन महतोलगायत दर्जनबढीले आफ्नो पनि श्रमदान र सहयोगको संकेत दिन कोदालोको सहाराले जग खनेका थिए ।
जग खनाइको माहौल यति उत्साहजन थियो कि उपस्थित सबैले मन प्रफूलित भएको महसुस गरेका थिए । आयोजकले कार्यक्रमको शैलीमा पनि भिन्नता ल्याएको थियो । अर्थात कार्यक्रममा कुनै प्रमुख अथिति थिएन, अध्यक्षता गराइन् । बालउद्यान निर्माणमा सबैको साथ र सबैको सहयोगको उत्तिकै महत्व रहने कुरा दर्शाउन आयोजकले सबैलाई समान सम्बोधन गरेको थियो ।
“विद्यालय निर्माण, तपाई हाम्रो अभियान” नारा दिएर सुरु भएको शिलान्यास कार्यक्रममाको प्रस्तोला राजकरण महतोले सुरुमै भनेका थिए । यहाँ कोही ठुलो छैन, कोही सानो छैन, कोही निच छैन, कोही उँच छैन हामी सबै बराबरा छौं । अगाडि उनले भनेका थिए हामीसँगै पैसा छैन, तर एउटा सपना छ यो विद्यालयलाई यस क्षेत्रकै नमूना बनाएर देखाउने । यसका लागि जसले जे सक्नु हुन्छ त्यसैबाट यो अभियान सफल हुने कुरा । कसैले माया गरिदिनुहुन्छ, कसैले सल्लाह दिनुहुन्छ, कसैले आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसैबाट यो योजना सकाएरै छाड्ने भन्दै अरु योजनाहरु यसैगरी निर्माण सफल भएको भएको जनाएका थिए ।
स्थापनाको सानो समयमा बर्दिबास क्षेत्रमा समाजिक कार्य गरेर चर्चा बटुल्न सफल जनसहयोगी युवा सञ्जालको सहकार्य बालउद्यान निर्माणको कार्य थालिएको छ । युवा अभियानी प्रमेश्वर महतोले नेतृत्व गरिरहेको जनसहयोगी युवा सञ्जालका सम्पूर्ण सदस्यहरुले बाल उघान निर्माणमा श्रमदान गर्नेछ । सञ्जालमा युवायुवती गरि २५ जना सदस्यहरु रहेको छ ।
बालउद्यान निर्माणमा समाजिक अभियन्ता एवं सञ्चारकर्मी राजकरण महतो र स्थानीय सञ्चारकर्मी अमृतकुमार महतोको महत्वपूर्ण प्रयास रहेको छ ।
राँगाको आक्रमणबाट एक महिलाको ज्यान गयो
नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप ३ सयय १६ जनामा कोरोना संक्रमण ,, संक्रमितको संख्या १३,हजार ५ सय ६४ पुग्यो
धनुषाका क्रसर सञ्चालक महादेव पक्राउ
विश्वकै सबैभन्दा होचो मानिस खगेन्द्र थापा मगरको निधन
हरसाहा विश्रामपुर सडक कालोपत्रे, भएपछी स्थानीय खुशी
जलेश्वरमा बालिका बलात्कार गर्ने छिमेकी पक्राउ
अल विदा सुरेश सर
बर्दिबासमा रोटरीले मास्क नलगाएर हिंडडुल गर्नेहरुलाई मास्क उपलब्ध गरायो
रामबहादुर बम्जन लगायत तीन जना विरुद्ध सर्लाही अदालतमा बाल यौन शोषणको मुद्दा
अध्यक्ष\_संचालक - निकेश खनाल